Home News Wararkii ugu dambeeyay Ee Boosaaso Iyo Howlgal culus oo ka socda
Wararkii ugu dambeeyay Ee Boosaaso Iyo Howlgal culus oo ka socda
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka socdaan Howlgallo amniga lagu xaqiijinayo.
Howlgaladaan ayaa yimid ka dib markii amniga Magaalada Boosaaso uu faraha ka baxay, islamarkaana saacaddihii ugu dambeeyay ay ka dhaceern dilal loo geystay Shacab iyo Madaxii Shirkadda DP World ee Boosaaso.
Howlgaladan oo ay sameynayaan Ciidanka Amaanka ee Maamulka Puntland ayaa waxa ay ka socdaan xaafadaha ay ka kooban tahay Degmada Boosaaso.
Ciidanka ayaa guri guri u baaraya, waxaana shacabka ay weydiinayaan aqoonsi iyo cida taqaana, sida uu soo sheegayo wariye ku sugan Magaalada Boosaaso.
Weli howlgaladan lama sheegin cid si rasmi ah loogu soo qabtey, hase ahaatee Ciidamada ayaa galaya inta badan guryaha ku yaalla Boosaaso.
(Akhriso) Beesha Caalamka oo digniin adag ka soo saartay Dagaalka Guriceel
Mareykanka oo sheegay in aay ka fiirsanayaan taageerada aay siiyaan ciidanka Danab
Taageerayaasha Villa Somalia “MW Farmajo Beenlow ma ahan oo waa Oofiyaa Ballamadiisa”
Somalia forces battle militia in central regions
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - October 24, 2021
Somalia’s forces on Saturday battled regional militia in the centre of the country, killing a senior elite commander and several others. The battle, which could signal...
(Akhriso) Beesha Caalamka oo digniin adag ka soo saartay Dagaalka...
Mareykanka oo sheegay in aay ka fiirsanayaan taageerada aay siiyaan ciidanka...